Faha-70 taon’ny 29 marsa 1947 : mbola tsy iombonana sy tsy mampiombona ny tantara | NewsMada
Faha-70 taon’ny 29 marsa 1947 : mbola tsy iombonana sy tsy mampiombona ny tantara
70 taona ny “Raharaha 29 marsa 1947”. Hatramin’izao, tsy mbola iombonana sy mampiombona ny tantara amin’ny karazana hetsika.
Nanomboka ny hetsika fahatsiarovana faha-70 taon’ny “Raharaha 29 marsa 1947” ny fanompoam-pivavahana fangataham-pitahiana ho an’ny tanindrazana, teny 67 ha, omaly. Hitohy eny amin’ny fiangonana adventista, Soamanandrariny, izany, anio; ary eny amin’ny katedraly FJKM, Analakely, rahampitso. Mandritra ny folo andro izay vavaka ho an’ny tanindrazana izay.
Misy ny fampirantiana an-tsary ny tantaran’ny 29 marsa 1947 ataon’ ny ONG Ilon-tsera eny amin’ny zaridaina, Mahamasina, omaly sy anio. “Miorim-paka ho fahafahana” ny lohahevitra. Nifarimbona amin’ny fanolorana tahirin-tsary ny sampam-pianarana tantara eny amin’ny oniversite, ny Anta, ny Fifanampiana malagasy, ny fianakaviana Rakotovao Martin, ny Tafika malagasy… Misy ny hetsika amin’ny haikanto toy ny tononkalo, hosodoko…
Hanao fampirantiana an-tsary koa ny Agence national Taratra (Anta) eny amin’ny Tranombokim-pirenena, Ampefiloha, manomboka anio ary hifarana ny 29 marsa. Entina mitety faritany ny fampirantiana. Any Moramanga sy Manakara, ohatra, manomboka ny andron’ny 29 marsa. Hisy fampirantiana avokoa ireo renivohi-paritany hatramin’ny volana desambra, ka hamarana izany ny any Toamasina.
Mila fanitsiana ny tantara momba ny 29 marsa 47
Eo koa ny fampirantiana ataon’ny Otrikafo eny amin’ny foibe toerany, Andravoahangy Ambony, nanomboka omaly ary hifarana rahampitso maraina. Tanjona kendrena amin’izany ny fanitsiana ny tantara diso momba ny “Raharaha 29 marsa 1947” hatramin’izay: nianarana tany an-tsekoly, narafitry ny ankamaroan’ny mpahay tantara, nampitain’ny mpanjanatany sy ny zaza navelany…
Tsy tolo-panafahan’ny tia tanindrazana notarihin’ny MDRM ny nampipoaka ny 29 marsa 1947, fa ny fandripahan’ny mpanjanatany ny tia tanindrazana malagasy ary famonoana ny fitiavan-tanindrazana eo amin’ny Malagasy, araka ny fanazavana azo.
Mba hisy fiantraikany amin’ny taranaka ankehitriny ny hetsika
Hitondra inona amin’ny taranaka ankehitriny ireo hetsika rehetra amin’izao fahatsirovana ny faha-70 taon’ny “Raharaha 29 marsa 1947″ izao ireo? Eo ihany ny fahalalana sy fahaizana ny tantaram-pirenena, na mbola tsy iombonana sy tsy mampiombona be ihany aza. Andrasana koa ny famelomana ny fitiavan-tanindrazana eo amin’ny tsirairay, indrindra ny hambompom-pirenena amin’ny fiandrianana, fahaleovantena, fandrosoana…